CleverTap: Falanqaynta Suuqgeynta Mobaylka iyo Barxadda Qaybaha | Martech Zone
CleverTap: Falanqaynta Suuqgeynta Moobiilka iyo Madal Qaybinta
Jimco, Juun 15, 2018 Jimco, Juun 15, 2018 Douglas Karr
Cudarada HTML aan la heli karin
CleverTap waxay u suurta galisaa ganacsatada mobilada inay falanqeeyaan, qeybiyaan, ka qeyb galaan, oo ay cabiraan dadaalkooda suuq geynta mobilada. Barmaamijka suuqgeynta moobiilka wuxuu isku daraa fikradaha waqtiga dhabta ah ee macaamiisha, mashiinka qeybsanaanta horumarsan, iyo aaladaha kaqeyb galka xoog leh ee hal madal suuq geyn ah, taasoo sahleysa uruurinta, falanqaynta, iyo wax ka qabashada aragtida macaamiisha ee daqiiqadaha.
Waxaa jira shan qaybood oo ka mid ah barnaamijka 'CleverTap':
Dashboard halkaas oo aad uga qayb qaadan karto isticmaaleyaashaada iyadoo lagu saleynayo ficiladooda iyo astaamaha astaamaha, u ololeyaal bartilmaameed u ah qeybahaas, oo aad falanqeyn karto waxqabadka olole kasta.
SDK-yada taas oo kuu ogolaaneysa inaad la socoto falalka isticmaalayaasha ee ku jira barnaamijyada moobiilkaaga iyo boggaga internetka. SDK-yadayada sidoo kale waxay awood kuu siinayaan inaad lashaqeyso barnaamijkaaga adiga oo ku siinaya inaad marin uhesho xogta astaanta isticmaalaha.
oo isdiyaari, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku riixdo astaanta isticmaalaha ama xogta dhacdooyinka meel kasta oo aad u dirto CleverTap. API-yadayada waxay sidoo kale awood kuu siinayaan inaad ka dhoofiso xogtaada CleverTap si loo falanqeeyo qalabka BI loona kobciyo macluumaadka macaamiisha ee CRMs.
Isdhexgalka oo leh aaladaha isgaarsiinta sida SendGrid iyo Twilio, bixiyeyaasha tilmaamaha sida Laanta iyo Tune, iyo barnaamijyada dib-u-eegista sida Shabakadda Dhageysiga Facebook.
Shabakadaha kuu oggolaaneysa inaad kiciso qulqulka socodka nidaamyada dhabarkaaga isla marka dhacdooyinka u-qalmitaanka ay dhacaan.
Nidaamka Suuqgeynta Moobilka ee CleverTap:
Funnels - Muuji sida saxda ah ee isticmaalayaashu u dhacaan.
Koofiyadaha haynta - Cabir inta isticmaaleyaashaada cusub ay soo noqdeen.
Socda - Indho indhee sida isticmaaleyaashu ugu dhex wareegaan barnaamijkaaga
Murugo - Muuqaalka warshadaha-ugu horreeya ee muuqaalka xogta wanaagsan iyo aragtida macaamiisha.
Astaamaha Isticmaalayaasha hodanka ah - Noocyada isticmaalaha hodanka ah si ay si fiican u fahmaan isticmaalayaasha
Ridayaasha - Raad-raac oo falanqee uninstalls-ka barnaamijka.
Qalabka Isgoysyada - Hal aragti ka hel adeegsadayaasha markay ka wareegayaan mobilada una wareejinayaan kumbuyuutarka.
Ka Qaybgal Isticmaalayaasha Kanaallada ay doorbidaan - Saameyn ku yeelashada macaamiisha adoo abuuraya ololeyaal ka qeyb qaadasho shaqsiyadeed oo isku xira kanaal walba.
Safarrada - Arag ahaan u dhis oo u samayso ololeyaasha omnichannel iyadoo lagu saleynayo isticmaaleyaashaada 'dabeecadda, goobta, iyo marxaladda nolosha.
Ololeyaal xariif ah - Ku orod ololeyaal horay loo sii cayimay si aad u haysatid dadka isticmaala, u kaxeeyaan kaqeybgalka, iyo yareynta qulqulka.
Ololeyaal Kiciyay & Jadwal Loo Sameeyay Jadwal u samee hal mar, soo noqnoqoshada, iyo ololeyaal kiciya oo ku saleysan habdhaqanka isticmaaleyaasha iyo astaanta.
waxkabadalka - U dir farriimo shaqsiyeed adoo adeegsanaya magac, goobta, iyo dhaqankii hore si aad uga kaxeyso hawlgelinta.
Imtixaanka A / B - Isbarbar dhig nuqul, hanti hal abuur leh, ama wicitaano ficil loogu dirayo farriin wax ku ool ah.
Qaybta Isticmaalaha - Isticmaalayaasha kooxda iyagoo ku saleynaya waxqabadkooda, goobta, iyo macluumaadka bogga si ay ugula macaamilaan waqtiga-dhabta ah.
Ogeysiiska riix - Si toos ah ugu dir farriimaha shaqsi ahaaneed, waqtigooda ku habboon aaladda gacanta ee adeegsadaha.
Farriimaha emaylka - Ka qaybgal isticmaalayaasha ka baxsan dalabkaaga fariimaha emaylka ee la bartilmaameedsanayo.
Ogeysiisyada Gudaha kujira - U dir ogeysiisyada khuseeya barnaamijka ku saleysan aqoonsiga isticmaaleha iyo dabeecadaha.
Ogeysiisyada SMS - U gudbi macluumaadka xasaasiga u ah waqtiga isticmaalayaasha fariin qoraaleed shaqsiyeed.
Ogeysiisyada Riix Webka - Ku gaadho isticmaaleyaasha saxda ah biraawsarkooda xitaa marka aysan ku jirin boggaaga.
Xayeysiiska Dib u Soo Celinta - Dib-u-hawlgal isticmaaleyaasha gaarka ah adoo bartilmaameedsanaya Xayeysiiska Facebook kooxdaas adeegsadayaasha ah.
Tags: Imtixaanka A / BAPIlaantaOloleyaal xariif ahQalabka IsgoysyadaFarriimaha emaylkaKa Qaybgal Isticmaalayaasha Kanaallada ay doorbidaanshabakada dhagaystayaasha facebookSocdaFunnelsOgeysiisyada Gudaha kujiraSafarradafalanqaynta moobiilkaapp mobilesuuqgeynta barnaamijka mobiladamadal suuq geynta barnaamijka mobiladamobilada sdkshakhsi ahaaneedMurugoriix ogaysiisyadaXayeysiiska Dib u Soo CelintaKoofiyadaha hayntaAstaamaha Isticmaalayaasha hodanka ahsdkSendgridogeysiisyada smsOloleyaal Kiciyay & Jadwal Loo SameeyaylaxanTwilioRidayaashaQaybta IsticmaalahaOgeysiisyada Riix WebkaShabakadaha
Tirakoob ku saabsan sida Socdaalku uga faa’iideysto baraha bulshada ka hor Fasaxa, Inta lagu guda jiro, iyo Kadib
2018: Sidee Shirkadaha iyo Macaamiisha u Isticmaalaan Baraha Bulshada